Six Eyes Single Red Swing Beam Laser Light - ỤLỌ & Onye nrụpụta
ỤLỌ ỤLỌ Ngwaahịa ỤLỌ Six Eyes Single Red Swing Beam Laser Light
Multi-Tiger Lighting nwere uru teknụzụ yana uru ika nke ikike ikike ọgụgụ isi nọọrọ onwe ya, Ngwaahịa, Ngwaahịa, Ngwaahịa, Internationalized na-eduga zuru ụwa ọnụ ọkụ ụlọ ọrụ na ọhụrụ ike. Internationalized na-eduga zuru ụwa ọnụ ọkụ ụlọ ọrụ na ọhụrụ ike, Internationalized na-eduga zuru ụwa ọnụ ọkụ ụlọ ọrụ na ọhụrụ ike, Internationalized na-eduga zuru ụwa ọnụ ọkụ ụlọ ọrụ na ọhụrụ ike, Internationalized na-eduga zuru ụwa ọnụ ọkụ ụlọ ọrụ na ọhụrụ ike!
Isi ngwaahịa nke ụlọ ọrụ ahụ bụ ọkụ ọkụ na-ebugharị : How to deal with the faulty?
Isi ngwaahịa nke ụlọ ọrụ ahụ bụ ọkụ ọkụ na-ebugharị :Firstly, Our products are produced in strict quality control system and the defective rate will be less than 0.2%.
na colloid na waya ọla edo na-emetụtakwa attenuation ìhè, during the guarantee period, we will send new lights with new order for small quantity. For defective batch products, we will repair them and resend them to you or we can discuss the solution including re-call according to real situation.
Isi ngwaahịa nke ụlọ ọrụ ahụ bụ ọkụ ọkụ na-ebugharị : What is the shipment method and exact time of arrival ?
Isi ngwaahịa nke ụlọ ọrụ ahụ bụ ọkụ ọkụ na-ebugharị :By air & By Express(DHL/UPS/TNT/FEDEX): You will receive your package within 14 Calendar days after payment. By Sea: It depends on the destination port.
Isi ngwaahịa nke ụlọ ọrụ ahụ bụ ọkụ ọkụ na-ebugharị : ma ị nwekwara ike ịrịọ anyị ka anyị zitere gị PI maka nkwenye gị. Anyị kwesịrị ịmara ozi ndị a maka iji gị , ma ị nwekwara ike ịrịọ anyị ka anyị zitere gị PI maka nkwenye gị. Anyị kwesịrị ịmara ozi ndị a maka iji gị , ma ị nwekwara ike ịrịọ anyị ka anyị zitere gị PI maka nkwenye gị. Anyị kwesịrị ịmara ozi ndị a maka iji gị , ma ị nwekwara ike ịrịọ anyị ka anyị zitere gị PI maka nkwenye gị. Anyị kwesịrị ịmara ozi ndị a maka iji gị , then you need to pay the freight to us .(Take in detail)
Isi ngwaahịa nke ụlọ ọrụ ahụ bụ ọkụ ọkụ na-ebugharị : ma ị nwekwara ike ịrịọ anyị ka anyị zitere gị PI maka nkwenye gị. Anyị kwesịrị ịmara ozi ndị a maka iji gị , 30% ma ị nwekwara ike ịrịọ anyị ka anyị zitere gị PI maka nkwenye gị. Anyị kwesịrị ịmara ozi ndị a maka iji gị , ma ị nwekwara ike ịrịọ anyị ka anyị zitere gị PI maka nkwenye gị. Anyị kwesịrị ịmara ozi ndị a maka iji gị 70% ma ị nwekwara ike ịrịọ anyị ka anyị zitere gị PI maka nkwenye gị. Anyị kwesịrị ịmara ozi ndị a maka iji gị , anyị ji obiọma na-atụ aro ka ị nyefee ọnụahịa zuru ezu n'otu oge n'ihi na enwere ụgwọ usoro ụlọ akụ , anyị ji obiọma na-atụ aro ka ị nyefee ọnụahịa zuru ezu n'otu oge n'ihi na enwere ụgwọ usoro ụlọ akụ .